Daniel 7 | Intanɛt so Bible | Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
7 Babilon hene Belsasar+ afe a edi kan mu no, Daniel soo dae, na onyaa anisoadehu wɔ ne mpa so.+ Saa bere no, ɔkyerɛw ɔdae no too hɔ.+ Ɔkaa asɛm no nyinaa. 2 Daniel kae sɛ: “Mihui m’anisoadehu mu anadwo, na hwɛ! ɔsoro mframa+ anan no bɛhwanyan ɛpo kɛse no.+ 3 Na mmoa akɛse anan+ pue fii ɛpo+ no mu bae; ɛsono oyi, na ɛsono oyi.+ 4 “Nea odi kan no te sɛ gyata,+ na ɔwɔ ɔkɔre+ ntaban. Mehwɛe ara kosii sɛ wotutuu ne ntaban no, na wɔmaa no so fii fam,+ na wɔma ogyinaa anan abien so sɛ onipa, na wɔmaa no onipa koma.+ 5 “Na hwɛ! aboa foforo a ɔto so abien a ɔte sɛ osisi ni.+ Ogyina hɔ tɔ kɔ ɔfã biako,+ na mparow abiɛsa hyɛ n’anom wɔ ne sẽ ntam, na wɔka kyerɛɛ no sɛ, ‘Sɔre di nam bebree.’+ 6 “Eyi akyi no, mehwɛe ara, na hwɛ! aboa foforo ni. Ɔte sɛ ɔsebɔ,+ na ɔwɔ anomaa ntaban anan wɔ n’akyi. Aboa no wɔ ti anan,+ na wɔmaa no tumi. 7 “Eyi akyi no, mehwɛe ara anadwo anisoadehu no mu, na hwɛ! aboa a ɔto so anan ni. Ne ho yɛ hu ne nwonwa na ɔwɔ ahoɔden boro so.+ Ɔwɔ dade sẽ akɛse. Ɔmemene bubu nneɛma mu, na nkae no, ɔde ne nan tiatia so. Ɛsono no koraa wɔ mmoa a wodii n’anim no nyinaa ho, na ɔwɔ mmɛn du.+ 8 Meredwinnwen mmɛn no ho no, hwɛ, abɛn ketewa foforo puei ɛnonom ntam,+ na kan mmɛn no mu abiɛsa ase tutui wɔ n’anim. Na hwɛ, aniwa a ɛte sɛ onipa aniwa ne ano a ɛkeka nsɛnkɛse+ wɔ abɛn no ho. 9 “Mehwɛe ara kosii sɛ wosisii agua,+ na Nea ne nna akyɛ+ no bɛtenaa ase. N’atade yɛ fitaa sɛ sukyerɛmma,+ na ne ti nhwi te sɛ oguanten nhwi fitafita.+ N’agua yɛ ogyaframa ara nko,+ na ne ntwahonan yɛ ogya a ɛrefram.+ 10 Ogya te sɛ asubɔnten sen fi n’anim ba.+ Mpempem som no,+ na mpem du ahorow mpem du gyinagyina n’anim.+ Wɔtenaa ase sɛ wɔrebu atɛn,+ na wobuebuee nhoma mu. 11 “Saa bere no, nsɛnkɛse a abɛn no kekae nti,+ mehwɛe ara. Mehwɛe ara kosii sɛ wokum aboa no, na wɔsɛee ne honam, na wɔde maa ogya a ɛrefram no.+ 12 Na mmoa a aka no nso,+ wogyee wɔn tumi, nanso wɔmaa wɔn bere ne dɔn+ a wɔn nkwa nna nkodu. 13 “Mehwɛe ara, anadwo anisoadehu no mu, na hwɛ, obi a ɔte sɛ onipa ba+ nam ɔsoro mununkum+ mu reba. Oduu Nea ne nna akyɛ+ no nkyɛn, na wɔma ɔbɛn n’anim.+ 14 Ɔno na wɔde tumi+ ne anuonyam+ ne ahenni+ maa no sɛ aman, nkurɔfo ne kasa horow nyinaa nsom no.+ Ne tumi yɛ daa tumi a ɛrentwam da, na n’ahenni yɛ nea wɔrensɛe no da.+ 15 “Me, Daniel, ɛno nti me honhom botowee me mu, na anisoadehu no ma misuroe.+ 16 Mitwiw bɛn wɔn a wogyina hɔ no biako, na mibisaa no na ama mahu eyi nyinaa mu yiye.+ Ɔka kyerɛɛ me, na ɔma mihuu nneɛma no nkyerɛase sɛ, 17 “‘Mmoa akɛse yi, esiane sɛ wɔyɛ anan nti,+ ahene baanan na wobefi asase so asɔre agyina.+ 18 Nanso Opumpuni+ no akronkronfo+ benya ahenni no, na wɔafa ahenni+ no daa afebɔɔ.’ 19 “Na aboa a ɔto so anan a ɛsono ɔno koraa wɔ wɔn a aka nyinaa ho a ne ho yɛ hu boro so na ne sẽ yɛ dade na n’awerɛw yɛ kɔbere a ɔmemene bubu nneɛma mu de ne nan tiatia nkae so no,+ mepɛe sɛ mete ne ho asɛm no ase; 20 ne afei ne ti so mmɛn du+ ne abɛn foforo+ a epuei a abiɛsa tutui wɔ n’anim,+ abɛn a ɛwɔ aniwa ne ano a ɛkeka nsɛnkɛse+ a wohwɛ a, ɛso sen nea aka no. 21 “Mehwɛe ara, na hwɛ, saa abɛn no ne akronkronfo no dii ako, na etumii wɔn,+ 22 kosii sɛ Nea ne nna akyɛ+ no bae, na wobuu atɛn maa Opumpuni no akronkronfo,+ na ɛbere dui ma akronkronfo no faa ahenni no.+ 23 “Ɔkae sɛ, ‘Aboa a ɔto so anan no bɛyɛ ahenni a ɛto so anan a ɛbɛsɔre asase so, na ɛbɛsono ɛno koraa wɔ ahenni a aka nyinaa ho, na ɛbɛmene asase nyinaa atiatia so abubu no.+ 24 Na mmɛn du no, ahenni no ara mu na ahene du bɛsɔre,+ na wɔn akyi no ɔfoforo bi bɛsɔre, na ɛbɛsono ɔno ne wɔn a wodii kan no,+ na ɔbɛbrɛ ahene baasa ase.+ 25 Na ɔbɛkeka nsɛm atia Ɔsorosoroni no,+ na ɔbɛhaw Opumpuni no akronkronfo.+ Ɔbɛbɔ ne tirim sɛ ɔbɛdan mmere+ ne mmara,+ na wɔde wɔn bɛhyɛ ne nsa, ɛbere ne mmere ne bere fã.*+ 26 Na wɔtenaa ase sɛ wɔrebu atɛn,+ na wogyee ne nsam tumi, na wɔsɛee no ma ɔsɛee koraa.+ 27 “‘Na wɔde ɔsoro nyinaa ase ahenni ne tumi ne kɛseyɛ maa Opumpuni no akronkronfo man no.+ Wɔn ahenni yɛ daa ahenni,+ na tumidi nyinaa bɛsom wɔn atie wɔn.’+ 28 “Ɛha na nsɛm no si. Na me Daniel, me tirim nsusuwii bɔɔ me hu pii, na m’anim sakrae, nanso asɛm no de, mede siee me koma mu.”+
^ Nnipa pii te eyi ase sɛ: “bere, mmere abien, ne bere fã,” kyerɛ sɛ, mmere abiɛsa ne fã